Nhau - Musiyano uripo pakati pesilicone sampula mould uye yekugadzira muforoma
Musiyano uripo pakati pesilicone sampuli muforoma uye yekugadzira muforoma
Kunzwisisa musiyano uripo pakati pesilicone sampula mould uye yekugadzira chakuvhuvhu?
Mune iyo silicone zvigadzirwa indasitiri, kana paine vatengi vatsva mukubvunza kwedu kuti tikurukure kubatana, isu tinobvunza vatengi kana ichi silica gel chigadzirwa chine chakuvhuvhu, kana pasina chakuvhuvhu, tinoda kutaura kuti tivhure chakuvhuvhu, iyo yekuvhura kwese kutaurwa. rakakamurwa kuvhura mharidzo chakuvhe chitaurwa uye kugadzirwa muforoma chitaurwa, saka nei tichida mhando mbiri chakuvhe chitaurwa? / Ndeupi musiyano uripo pakati pesampuli muforoma uye yekugadzira muforoma yezvinhu zvesilicone zvigadzirwa? Chengda rabha nemapurasitiki zvinounza iwe kuti unzwisise!
Kuti tinzwisise musiyano uripo pakati pesampuli muforoma uye yekugadzira muforoma yezvinhu zvesilicone zvigadzirwa, isu tinofanirwa kutanga tanzwisisa kuti chii chinonzi sampula chakuvhe uye chii chiri chigadzirwa chemuchina Pano, ini ndichakutsanangurira iwe kuti iyo muyenzaniso muforoma ndiyo chaiyo yekuumba silica gel mould yakanyatso shandiswa kuratidza proofing. Iyo inogona zvakare kuita iyo yekuumba yekugadzira basa, asi chikuru chinhu kuratidza vatengi kana mhando, maitiro uye chimiro chedu zvigadzirwa zviri OK, Iyi sampuli muforoma haigone kugadzirwa, uye yekugadzira muforoma inogona kushandiswa kune iyo vulcanization kuumbwa uye kugadzirwa kwesilica gel zvigadzirwa. Chinangwa chayo chikuru ndechekuiisa mukati mekugadzira, pane kusimbisa zvigadzirwa zvevatengi. Iyo yekugadzira chakuvhuvhu ibwe chigadzirwa chakashandurwa nekushandura saizi chimiro chemasilika esiki zvigadzirwa pachiyero chemuenzaniso muforoma.
Musiyano uripo pakati pesampuli muforoma uye yekugadzira muforoma ndeyekuti muyenzaniso muforoma unogona zvakare kupedzisa iyo vulcanization kuumba basa, asi muyenzaniso mould inogona chete kupedzisa isingasvike mashanu ekuumba basa rekugadzira, nepo chigadzirwa chekugadzira chinogona kupedzisa mazana ekuumba basa. Uye zvakare, muchimiro chekuumbwa kwekugadzira, iyo yekugadzira muforoma inonyanya kufunga nezve iyo yekupedzisira mold yekushandurwa, Uye chikuru kufunga kwekugadzira muforoma kugadzirwa, mhando!